Yakaburitsa vhezheni nyowani yeLibreOffice 6.4 uye idzi ndidzo shanduko dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani ye inonyanya kufarirwa yakavhurwa sosi hofisi suite, LibreOffice 6.4, vhezheni iyo iyo Gwaro Foundation yakaratidza kuburikidza nechipositi pane yayo blog. Iyi vhezheni nyowani yeLibreOffice 6.4 yakagadzirirwa mu75% yeshanduko nevashandi vemakambani ekudzora mapurojekiti seCollabora, Red Hat neCIB uye 25% yeshanduko yakawedzerwa nevanofarira vakazvimirira.
Mukati yezvakakosha zvakagadziriswa kubatana kweiyo mamiriro ezvinyorwa zvemahara hyperlink, chitsva yemunharaunda yekutsvaga injini yemapeji ekubatsira, iko kugona kwekubatanidza makomendi nemifananidzo uye zvimwe zvakawanda.
LibreOffice 6.4 main matsva maficha
Nokuburitswa kweiyi nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.4 chimwe chezvinhu zvinomira pachena ndiyo iyo yezvinyorwa zvinoratidzwa papeji rekutanga, inopihwa la icon inoratidzira nezviratidzo zvekushandisa, ichikubvumidza iwe kuti uone pakarepo mhando yegwaro.
kunze kwaizvozvo iyo interface inosanganisa iyo QR kodhi jenaretaque inokutendera iwe kuisa kodhi yeQR mugwaro ine mushandisi-yakatarwa chinongedzo kana zvinyorwa zvekupokana, izvo zvinogona kukurumidza kuverenga kubva kune mbozhanhare
MuImpress, Dhirowa, Munyori uye Calc, iro dialog bhokisi rekuisa QR kodhi inovhurwa kuburikidza nemenyu «Pinza - Chinhu - QR Code".
Kune ese LibreOffice zvinhu, menyu yemamiriro ekushandisa ma hyperlink akabatana. Mune chero gwaro, kuburikidza nemenu yemamiriro ezvinhu unogona ikozvino kuvhura, kugadzirisa, kuteedzera kana kudzima chinongedzo.
Chishandiso chekugadzirisa otomatiki chakawedzerwa, chii manje inokutendera kuti uvanze data rakavanzika kana rakavanzika mune zvinyorwa zvinotumirwa kunze (semuenzaniso, kana uchichengeta kuPDF) zvichibva pamushandisi-yakatsanangurwa mamask mameseji kana mataurirwo enguva dzose.
Iyo yakavakirwa-mukati yemunharaunda injini yekuwedzera yakawedzerwa yemapeji ekubatsira, iyo inobvumidza iwe kuti uwane nekukurumidza izano rinodiwa (iyo yekutsvaga yakavakirwa pane xapian-omega injini). Mapeji mazhinji erubatsiro akaisa munzvimbo mavo screenshots, mutauro weiyo interface yezvinhu inowirirana nemutauro wechinyorwa.
MuImpress uye Dhirowa, iyo "Simbisa Chinyorwa" sarudzo yawedzerwa kune iyo «Shape» menyu, iyo inokutendera iwe kusanganisa akati wandei akasarudzwa mabhureki nemavara kuita rimwe. Semuenzaniso, kushanda kwakafanana kunogona kudikanwa mushure mekunze kubva kuPDF, semhedzisiro iyo rugwaro rwakazove rwakakamurwa kuita akawanda akapatsanurwa mabhuroko.
Iko kugona kweRibreOffice Online server shanduro yakawedzerwa, ichikubvumidza iwe kuronga kubatana pamwe nehofisi suite pamusoro pewebhu. Munyori Pamhepo izvozvi ave nekwaniso yekuchinja tafura zvivakwa Kubudikidza nepadivi, yakaitwa rutsigiro ruzere rwekushanda pamwe negwaro tafura yezviri mukati.
Ipo yeiyo vhezheni ye Munyori desktop izvozvi ine kugona kumaka makomendi sekugadziriswa (semuenzaniso, kuratidza kuti iyo yakarongwa kuronga mune yekutaura yapera). Mhinduro dzakagadziriswa dzinogona kuratidzwa neakakosha tag kana yakavanzwa.
Uye zvakare, zvinojekeswa izvo Tsigiro yeMicrosoft Office zvinyorwa muDOCX, PPTX uye XLSX mafomati akagadziridzwa zvakanyanya, pamwe nekuvandudzwa kwekuita kana uchichengeta uye kuvhura maspredishiti ane huwandu hukuru hwemashoko, masitaera, uye shanduko-yekuteedzera manyorero.
Dzimwe shanduko izvo zvinomira kunze kweiyi nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.4:
Wakawedzera rutsigiro rwekubatanidza makomendi kwete chete kune zvinyorwa, asiwo kune mifananidzo nemadhirama mukati megwaro.
Zvishandiso zvekuronga matafura zvakawedzerwa kune Munyori wepadivi.
Yakagadziriswa sarudzo yemasero ane ma hyperlink.
MuCalc Online, ese mashandiro ebasa wizard aripo.
Finalmente kana iwe uchida kugadzirisa kune iyi nyowani vhezheni ye LibreOffice 6.4 hofisi suite, unogona kurodha pasi akaunganidzwa mapakeji ekutsigirwa nerutsigiro rwe DEB neRPM mapakeji kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti muchikamu chayo chekurodha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yakaburitsa vhezheni nyowani yeLibreOffice 6.4 uye aya ndidzo shanduko